Tag: elekọta mmadụ website | Martech Zone
Tag: elekọta mmadụ na ebe nrụọrụ weebụ
Satọde, Satọdee 15, 2012 Satọde, Satọdee 15, 2012 Douglas Karr
Kwado saịtị gị maka mgbasa ozi mmekọrịta bụ otu atụmatụ, mana ịwulite atụmatụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-ezukọ ebe ahụ bụ ihe ọzọ. Agaghị agwakọta ha abụọ… otu gbasara ngwaọrụ, nke ọzọ gbasara ndị mmadụ. Buru n'uche na e nwere ọtụtụ, ọtụtụ saịtị na-enweghị ngwaọrụ ọhụụ niile, mana nwee ọrụ mmekọrịta dị egwu na ha. Ruo ọtụtụ afọ, ndị mmadụ ajụla ndị ọgbọ ha tụkwasịrị obi maka ndụmọdụ maka ngwaahịa
N'oge m niile nwere ohere (ha!), Anọ m na-arụ ọrụ iji mechie ngwa nnụnnụ na-enweghị oke nnụnnụ na ngwa ngwa nke ga-eme ka ndị folks chepụta ebe obibi ha. Zụlite sọftụwia m dịka ihe enyemaka nke ọrụ abụwo ihe mgbaru ọsọ nke m ruo afọ ole na ole, nke a bụ ohere dị ukwuu. E nwere isi ihe abụọ dị na shelf m chọrọ itinye na ngwa ahụ na-atụgharị